बास्कोटाको प्रश्नको जवाफमा ओलीले बैठकमा भने, ‘कमरेड गोकुल बास्कोटालाई बताउनैपर्ने भो । गोकुल बास्कोटाले सुन्ने गरी भन्छु, परिस्थितिमा काफी फेरबदल आयो ।
नारायणीको किनारमा त्यत्रो मान्छे उपस्थित भए । पुलिसले भनेको ७ लाख, केही मिडियाका मान्छेले मलाई सुनाए ८ लाख, स्थानीयको अनुमान छ १० लाख । यत्रो उत्साह आएपछि परिस्थितिमा फेरबदल आएन ?’
ओलीको जवाफमा बास्कोटाले चित्त बुझाएनन् । उनले फेरि उभिएर सोधे, ‘यी पद थपेपछि हामीले के बुझ्ने ? अब सहमति भयो हैन त ?’फेरि ओलीले भने, ‘गोकुल बास्कोटालाई चित्त बुझेन जस्तो छ, सुवास (नेम्वाङ) जी, चित्त बुझ्यो हैन तपाईंलाई ?’
सुवास नेम्वाङ बोलेनन् । ओलीले भने, ‘कुरा बुझियो बास्कोटाको, अब बस्नोस् ।bबास्कोटाले हलबाट भने– मेरो अर्को पनि प्रश्न छ । ओली– चित्त बुझेन ? बास्कोटा– बुझेन । ओली– माथिमात्रै मिलायौ, तल पनि चाहिन्छ भन्या हैन ?
बास्कोटा– हो । ओली– ल, त्यसोभए तल (केन्द्रीय सदस्य) को पनि थपियो । अब त चित्त बुझ्यो होला नि ? बास्कोटा– खै, मलाई त अझै लागेन । यसको आशय भोलि सहमति हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ । ओली– अब त भयो नि हैन सुवासजी ?
केपी ओलीकै निकटमा रहेका ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सहमतिकै विरोध गरेका होइनौँ, तर कसैलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा विधान नै संशोधन गरेर पद सिर्जना गर्नुभन्दा जबज अनुसार प्रतिस्पर्धामा जाँदा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मत हो । अब पद थप्दा पनि सहमति जुटेन र चुनावमा जानुपर्‍यो भने यसको जिम्मेवारी विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ लगायतले लिनैपर्छ ।’